Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika ! | Grandir à Antsirabe
Tontolo andro teny amin’ny natiora, « Pépinière d’Ambatolahy »
Raha teny amoron’ny farihin’Andraikiba no nankalaza ny noely tamin’ny taon-dasa, 2017. Nisitaka kely tany anaty natiora izany tamin’ity taona ity ! Somary mihataka kilometatra vitsivitsy ny renivohitra Antsirabe, « Pépinière d’Ambatolahy » toerana nety tsara nilalaovana sy nanaovana fety anaty kianja malalaka.
Famantarana ireo karazan-java-maniry, dihy sy baolina kitra
Tonga teny an-toerana tamin’ny 9ora sy 30, natomboka tamin’ny fitetezana ny faritry ny fambolen-kazo izany, notarihin’ny mpiasa iray. Afaka nanararaotra tsara namantatra ireo karazan-java-maniry maro, sady namantatra ihany koa ny mampiavaka azy ireny tsirairay avy sy ny ilaina azy. Taorian’izay dia nifidy toerana malalaka ny ekipa, avy eo tsy niandry ela fa avy hatrany dia nanomboka ny dihy manentanentana ho an’ny sasany, ny hafa kosa nanitsana kely tamin’ny baolina kitra. Ampilaminana sy tao anaty hafanana no niridanan’ny ankizy nanararaotra ny toerana.
Tsy ela dia nipaika ny mitatao-vovonana. Tonga nivimbana izato sakafo ireto mpahandro mahafatram-po. Nanao ladina an-tany teny ambony bozaka ny rehetra! Sakafo mafilotra nilaoka kotoleta sy legioma sy akondro natao tsindri-tsakafo. Matsiro aoka izany !
Ireo kilalao sy ireo fanomezana
Rehefa vita ny fandevonana ny sakafo, niaraka nirona amin’izay nanao kilalao nitambaran’ny rehetra, kilalao nifototra amin’ny fifampizarana. Naoraka tamin’izany ny kilalaon’ny « épervier » : tsy nila fanazavana ela akory fa avy hatrany dia hain’ny ankizy. Nizara ekipa 2, dia samy nanao izay hampandresy ny tarika misy azy, tsiky sy hehy no nanamasaka ny lalao.
Tamin’ny 3 ora tolak’andro. Fizarana izato fanomezana. Nodidininin’ny rehetra tao anaty boribory i Dadabe Noely, nisosana tsirairay ny ankizy nandray ny anjara fanomezany, nahazo vatomamy avokoa fa ho an’ny madinidinika « peluche », ny vaventy kosa nahazo satroka, ireo tovovavy nahazo pôketra.
Vetivety dia nody ingahy be masoandro… tava miramirana no netina namonjy fodiana tany amin’ny trano fandraisana vonjimaika, pika sary tsy ankijanona sy tsiky no nisoritra teny amin’ny tavan’ny rehatra.
MG	Portrait/ Faranah, ilay ao ambadikin’ny faka…